२१२ प्रकास वर्ष टाढा भेटियो नयाँ ग्रह, जहाँ ग्यास बल्छ र पानीको वर्षा हुन्छ ! – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर २१२ प्रकास वर्ष टाढा भेटियो नयाँ ग्रह, जहाँ ग्यास बल्छ र पानीको वर्षा हुन्छ !
२१२ प्रकास वर्ष टाढा भेटियो नयाँ ग्रह, जहाँ ग्यास बल्छ र पानीको वर्षा हुन्छ !
वासिंटन: नासाको हब्बल टेलिस्कोपले बृहस्पति आकारको ग्रहमा मौसम प्रणालीको संकेत क्याप्चर गरेको छ ।
यहाँको तापमान २,१९५ फरेनहाइट भएको नासाले जनाएको छ । एसआरओएन नेदरल्याण्डस् इन्स्टिट्युट अफ स्पेस रिसर्च र युनिभर्सिटी अफ ग्रोनिगनले डब्लुएएसपी–३१ बी को तस्वीरमाथि अध्ययन गरेका छन् ।
नासाका अनुसार यस ग्रहको एकातर्फको हिस्सा सँधै सूर्यबराबर आफ्नो तारातर्फ नै रहन्छ । यहाँको तापमान २१९२ डिग्री हुन्छ ।
अध्ययनण्कर्ताले यस ग्रहलाई ट्वाइलाइटल जोनमा क्रोमियम हाइड्राइड फेला पारेका हुन् । यहाँ तापमान र दवावका कारुण तरल र ग्यास अवस्थामा रहन्छ । रात भएको क्षेत्रमा वर्षा हुने दिन हुने क्षेत्रमा ग्यास हुने नासाले बताएको छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार कुनै पनि ग्रहमा जीवन छ वा छैन भन्ने जानकारी लिन त्यहाँको मौसम प्रणाली अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
डब्लुएसपी–३१ बी बृहस्पति भन्दा डेढ गुणा ठूलो छ । तर, यसको द्रव्यमान भने बृहस्पतिको आधा छ । यो आफ्नो ताराको एक चक्कर ३.४ दिनमा लगाउने गर्दछ । परियोजनाका नेतृत्वकर्ता माइकिल मिनका अनुसरा तातो बृहस्पतिजस्तो देखिने यो ग्रहको एक क्षेत्र सधै आफ्नो तारातर्फ नै हुने गर्दछ । कुनै ताराको चक्कर लगाउने यो ग्रह (एक्सोप्लानेट) पृथ्वीबाट निकै टाढा छ ।
त्यही पुगेर अध्ययन गर्नका लागि हालसम्म विकसित प्रविधिको विकास पनि भइसकेको छैन । यद्यपि टेलिस्कोप र पृथ्वीमा रहेका अन्य उपकरणको मद्दतले यो ग्रहबारे अध्ययन गर्न सकिने मिनले बताएका छन् ।
यो ग्रह पृथ्वीबाट २१२ प्रकाश वर्ष टाढा वर्गो तारामण्डलमा स्थित छ । अनुमानअनुसार सूर्यबाट पृथ्वीको जति दूरी छ यो ग्रहको आफ्नो तारासँगको दूरी करिब १६ गुणा बढी छ । युनिभर्सिटी अफ मोन्ट्रियलका रिसर्चसले ग्रहको आकार र घनत्व पत्ता लगाएका हुन् । यसको घनत्व कम हुनुले पृथ्वीको द्रव्यमानभन्दा यस ग्रहको कोर करिब चार गुणाभन्दा बढी नभएको अध्ययनकर्ताले बताएका छन् । साथै यसको ८५ प्रतिशत तौल ग्यासको मोटो परतको रुपमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।